MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA HAVANESE IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha Havanese iyo Sawirro
Coby, Havanese qalin ah oo 4 jir ah, sawir qadarin leh MistyTrails Havanese
Haddii aan waligood la xoqin, la jarjarin ama aan sinnaba loo beddelin, reer Havanese waxay ku siinayaan aragti kacsan eey yar. Lugaha waa xoog badan yihiin waxayna u oggolaanayaan dhaqdhaqaaq bilaash ah oo fudud. Indhaha madow iyo dabo dhaadheer waxaa ku daboolan timo dhaadheer oo xariir ah. Koodhku wuxuu ku kala geddisan yahay ruxruxa illaa uu isku laaban yahay. Koodhka xadhkaha leh waxaa aqoonsan labada AKC (American Kennel Club) iyo CKC (Canadian Kennel Club). Havanese waa nooc laba jibbaaran oo timo jilicsan leh, labadaba jaakadda sare iyo koodhka hoose. Koodhka dadka waaweyni wuxuu gaaraa 6 ilaa 8 inji, oo wuxuu leeyahay sheen pearl ah. Qaar reer Havanese ah waxay wataan hiddo-wadaha gaagaaban ee gaagaaban. Haddii laba qof oo qaangaar ah oo hiddasidahan hidde-wadayaasha ahi leeyihiin qashin eeyo yaryar , waxaa suurtagal ah in eeyaha qaarkood ay ku dhalan doonaan jaakado siman . Reer Havanese ah oo leh jaakad gaagaaban lama tusi karo, maadaama ay cilad weyn ku tahay fagaaraha bandhigga. Qaarkood waxay naanaysteen Havanese ku dhashay jaakadaha gaagaaban ee Shavanese. Qarka isha, sanka iyo bushimahu waa madow adag yihiin dhamaan midabada marka laga reebo eyga shukulaatada runta ah. Reer Havanese waxay ku yimaadaan midab kasta, oo ay ku jiraan kareem, dahab, caddaan, lacag, buluug iyo madow. Sidoo kale parti iyo saddex midab. Waqooyiga Ameerika, midabada oo dhan waa la aqoonsan yahay in aan midab laga doorbidayn mid kale. Madow iyo shukulaato ayaa la door bidaa midabyo leh kuwo badan oo ka soo jeeda Waqooyiga Ameerika. A shukulaato Havanese waa inay heysataa ugu yaraan 1 inji (2.6 cm) balastar ah timo shukulaato ah. Shukulaatadu sidoo kale waxay leeyihiin indho cagaaran ama cagaar. Wadamada yurub qaar ka mid ah eeyaha madow iyo shukulaatada marwalba lama aqoonsan jirin, laakiin eeyaha madow ayaa la aqoonsaday dhowr sano, eeyaha shukulaatada ayaa haatan dhawaan la aqoonsaday. Socodku waa mid gaar ah, noole iyo “gu’, kaas oo xoojinaya dabeecadda faraxsan ee reer Havanese. Dabada waxaa lagu qaadaa dhabarka gadaashiisa. Noocani waa nooc jireed oo adag iyo dastuur hagaagsan. Havanese waa adag tahay, in kasta oo nooc yar yahay, haddana ma jilicsan mana badna.
Havanese waa eeyo wehel dabiici ah, dabacsan oo wax jawaaba. Waxay aad ugu xiriiraan qoysaskooda aadanaha waxayna aad ugu fiican yihiin carruurta. Aad u kalgacal badan oo si sir ah u ciyaara, eeyahaas faraxsan ayaa ah kuwo aad u dad badan oo la jaan qaadi kara qof kasta oo ay ku jiraan dadka, eeyaha , bisadaha iyo xayawaanka kale . Way fududahay in la addeeco tareenka. Eygan xiisaha lihi wuxuu jecel yahay inuu fiirsado waxa socda. Waxay xasaasi u tahay codka codkiisa mana dhageysan doono haddii ay dareento inay ka maskax adag tahay milkiilaheeda, hase yeeshe sidoo kale sifiican ugama jawaabi doonto anshaxa adag. Milkiilayaashu waxay u baahan yihiin inay is dejiyaan, hase yeeshee leeyihiin hawo awood dabiici ah. Havanese-ku wuxuu leeyahay sumcad dheer inuu yahay eey circus ah, malaha maxaa yeelay si dhakhso leh ayuu wax u bartaa oo wuxuu ku raaxaystaa wax u qabashada dadka. In yar baa u muuqata inay ciyo badan, maxaa yeelay waxaa la bari karaa inaysan sidan sameynin ma aha dabeecadoodu inay wax badan ciyo. Waxaa ugu wanaagsan in la baro in aysan ciyi karin wax aan loo baahnayn intay weli yahiin si looga hortago inay caado u noqoto. Havanese waa eeyo waardiye ah oo wanaagsan, hubiyana inay ku ogeysiiyaan marka booqde yimaado, laakiin si dhakhso leh ayey u soo dhaweyn doonaan martida markay arkaan inay soo dhoweynayaan. Qaar ka mid ah eeyaha aan sida saxda ah loo dhex-dhexaadin ayaa laga yaabaa inay muujiyaan heer xishood leh oo ku saabsan shisheeyaha, laakiin tani maahan mid lagu garto nooca. Havanese waxay ku nool yihiin erey kasta iyo tilmaam kasta. Iyagu waa inay noqdaan kuwo aan xishood lahayn ama dagaal badan --Hadday yihiin, taasi waa natiijada a aadanaha oo aan siinin hoggaan xirmo habboon iyo / ama maya ula dhaqanto eyga sida bakooradda, laakiin bini-aadam ahaan . Havanese-ku ma muujiyaan fulaynimo, in kasta oo ay le’eg tahay. Ha u oggolaan Havanese inay horumarto Cudurka Dog yar .
Dhererka: 8 - 11 inji (20 - 28 cm)
Miisaanka: 7 - 13 rodol (3 - 6 kg)
Tani waa nooc caafimaad oo muddo dheer noolaa, si kastaba ha noqotee, dhammaan noocyada cimriga dheer ayaa ugu dambeyntii leh dhibaatooyin caafimaad. Qaarkood waxay u nugul yihiin PRA (Indhaha Dib-u-noqoshada Atrophy), indho-indheynta, indho-indheynta carruurta yaryar, Chonrdodyplasia, raaxada patellar (jilbaha kala baxa), Legg-Calve Perthes Disease, wadnaha, dhibaatooyinka beerka iyo kelyaha, maqal la'aanta labada dhinac, Sebaceous Adentis (SA), qalal iyo maqaar qalalan.
Havanese waxay ku fiican yihiin nolosha guryaha. Iyagu gudaha ayay aad ugu firfircoon yihiin waxayna sameyn doonaan wax hagaagsan iyadoon deyr lahayn. Havanese waxay u dhasheen inay ku noolaadaan gurigaaga, mana ku noolaan barxad ama aqal, laakiin isla waqtigaas, waxay u baahan yihiin jimicsi fara badan.
Eygan yar ee ciyaarta leh ayaa leh celcelis ahaan dalab jimicsi. Noocan ayaa loo baahan yahay in la qaato maalin kasta soco . Intaad socotid hubi inaad ciribta eeyga ka dhigto hogaanka. Waa dareen in eeygu maalin kasta tahriibo oo uu yeesho hoggaamiye, maskaxdooda ayaana hoggaamiyaha ku hoggaamiya. Tani waa mid aad muhiim ugu ah kor u qaadista xayawaanka si wanaagsan loo soo koobay, oo dheellitiran.
Qiyaastii 14-15 sano
1 - 9 eeyo, isku celcelis 4
Xayawaanka rabbaayadda ah, jaakadda waa la soo gaabin karaa si loo daryeelo. Haddii jaakad la ilaalinayo muddo dheer waxay u baahan tahay in si fiican loo cadaadiyo loona shanleeyo ugu yaraan laba jeer usbuucii. Waxaa jira looshan la heli karo oo looga hortagayo in timuhu kala baxaan. Koodhadhka isku-xidhan ayaa u baahan daryeel gaar ah . Eeyaha kuma dhasho jaakadaha xadhkaha leh. Waa qaab timo xardhan oo la xushay. Dharka waad xiri kartaa ama waad cadayan kartaa jaakadda. Hadaanu bini'aadamku xanaaneynin eeyaha ayaa jaakaduhu noqon lahaayeen kuwo qasan. Jaakad dhibic ah ayaa sidoo kale ah qaab isdaba-marin aadanaha. Ka soo qaad timaha xad-dhaafka ah cagaha dhexdooda. Cagaha laftooda waa la jari karaa si ay u eegaan hareerahooda. Show eydu waxay u baahan yihiin heshiis aad u badan oo qurxin ah. Wax yar oo daadis ahi ma jirto, markaa timaha dhintay waa in laga saaraa cadayashada. Hubi indhaha iyo dhegaha si joogto ah. Haddii dhegaha aan nadiif laga dhigin waxay u nugul tahay inuu ku dhaco infakshanka dhegaha. Quruxda reer Havanese oo si wanaagsan loo xardhay ayaa ah inuu wali u muuqdo mid jaban oo aan taxaddar lahayn. Haddii aad caadeysid eeygaaga inuu musbaar ka jaro da 'da' eyda, waa inay aqbasho jadwalka qof weyn. Ilkaha waa in la cadaydo usbuuc walba, tanina sidoo kale waxaa ugu wanaagsan oo lagu bilaabay sidii eey. Noocani wuxuu u fiicanyahay dadka xasaasiyadda qaba. Iyagu waa eey aan daadin, hypo-allergenic. Si kastaba ha noqotee, Shavanese (Havanese wuxuu ku dhashay jaakad gaaban) oo leh jaakado aad u eg sida celceliska eeyga oo isbarbar dhiga muuqaal ahaan Balanbaalis , daadi. Waxaa la rumeysan yahay, laakiin aan weli la xaqiijin 100%, in si ka duwan kan Havanese-ka dhaadheer, timaha gaaban ee Shavanese aysan aheyn kuwa loo yaqaan 'hypo-allergenic' sidaas darteedna ma ahan xulasho wanaagsan dadka qaba xasaasiyadda.
Ka dib kacdoonnadii Faransiiska, Kuuba iyo Ruushka, Havanese way ku dhowaayeen bakhtiyey . Hadda waa ku yar tahay Cuba, noocyadu waxay la kulmeen dhibaato illaa 1900, laakiin hadda waxay ku sii kordheysaa caan, iyadoo leh qaar ka mid ah rumaystayaasha aaminka ah ee ku jira jinsiga kuwaas oo si firfircoon ugu ololeeya sidii loo ilaalin lahaa Maraykanka. Eygan ayaa ka tirsan qoyska eeyaha loo yaqaan Bichons . Ereyga faransiiska ah Bichon Frize macnihiisu waa 'eey firxad ah' ama 'eey curly lap'. 'Bichon' waxaa loola jeedaa muuqaalka gadhka leh ee taranka, sida erayga 'barbichon' oo macnaheedu yahay gadh yar, halka erayga 'Frize' macnaheedu yahay curly. Bichon Havanese wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Cuba asalkiisii ​​hore oo loo yaqaan Blanquito de la Habana (oo sidoo kale loo yaqaan Havanese Silk Dog — oo ah nooc hadda bakhtiyey). Bichon Havanese waxay qurxisay oo ku badhaadhay guryaha dadka reer Cuba ee aristocratic intii lagu jiray qarniyadii 18aad iyo 19aad. Bichon lapdogs waxaa la keenayay Cuba qarnigii 17aad ee laga keenay Yurub waxayna la qabsadeen cimilada iyo caadooyinka Cuba. Ugu dambeyntiina, xaaladahaasi waxay dhaleen eey ka duwan kan ka yar kuwii ka horreeyay, oo leh jaakad cad oo gebi ahaanba casaamadeed leh. Eygan wuxuu ahaa Blanquito de la Habana. Qarnigii 19-aad, Cubans-ka waxay jeclaadeen Faransiiska iyo Jarmalka Poodles, kuwaas oo lagala soo gudbay Blanquito jira si loo abuuro maanta Bichon Havanese. Horumarinta Havanese, Blanquito wuxuu aad uga awood badnaa Poodle. Bichon Havanese wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa qarnigii 19aad (1800-11899). Waxaa si isdaba joog ah looga soo saari jiray Cuba dhammaan qarnigii 20aad (1900-1999) waxayna ahayd xayawaanka / eyga doorbida qoysaska Cuba. Taranka Havanese-ka ee USA waxaa kaliya laga bilaabay 1970s. 1960-yadii qaar badan oo reer Cuba ah ayaa u haajiray USA. Qaxootiga Kuuba badankood waxay degeen Florida qaarna waxay keeneen xayawaannadooda (Havanese). Cunto-yaqaan Mareykan ah, Marwo Goodale ayaa ka badbaadisay noocyada inay baabi'iyaan. Waxay ku xayaysiisay warqad Florida ah, waxayna heshay laba ama seddex qoys oo soogalooti ah oo ka yimid Cuba oo waraaqo watay. Iyaga, Mrs. Goodale waxay ka heshay 6 Bichon Havanese oo leh dhalasho: dheddig leh 4 haween ah oo ubad ah, iyo nin dhalinyaro ah oo aan ehel ahayn. Markii dambe waxay awoodday inay 5 rag ah oo dheeri ah ka hesho Costa Rica. Marwo Goodale iyada oo khibrad badan leh xagga beeraha, waxay billowday inay la shaqeyso 11-ka eey. Khadkeedii ugu horreeyay waxay soo baxday 1974. UKC ayaa aqoonsatay iyaga 1991. AKC-da ayaa aqoonsatay 1996. CKC (Canadian Kennel Club) ayaa aqoonsatay 2001. Qiyaastii 1980-kii, dhowr ka mid ah kuwa reer Jarmal ee soosaara ayaa bilaabay inay ka helaan eeyo yaryar oo dahaarka u dahaaran oo ku jira qashin-qubka leh Havanese joogto ah. . Markay ardaydan bislaadeen uma aysan korin jubbado buuxa sida saaxiibadood kale. Waxay ku baalasheen goonnada, dabo, lugaha, laabta iyo dhegaha — timaha intiisa kale inteeda kale waxay ku dhowaayeen jiif. Waxay si aan caadi aheyn ugu koraan inay yeeshaan jaakado siman. Kalkaaliyeyaasha ayaa isu yimid waxayna ogaadeen in tani ay ka dhaceyso meelo kale oo Havanese ah mana aheyn fursad isbeddel hidde-wadaha hal qashin keliya, laakiin wax baa lagu qaaday Havanese badan oo ah hidda-wade. Eeyahaas ayaa loo yeedhay Havanese oo si siman loo dahaadhay , laakiin waxaan ka soo qaatay magaca Shavanese meel khadka ka mid ah. Havanese-ka dusha ka daboolan ma ahan wax la soo bandhigi karo ama la soo saari karo, si kastaba ha noqotee dhammaantood waa caafimaad qabaan.
Kaliya kuwa Havanese ka diiwaangashan Naadiga Asalka ah ee Havanese (OHC) ayaa laga diiwaan gelin karaa UKC. Havanese sidoo kale waxaa aqoonsan Ururka Caadiga ah ee Mareykanka.
Jazz Havanese-ku-dahaarka leh oo leh jaakaddiisa gaaban.
Shaqaalaha markabka MistyTrails Havanese — Reo oo jira 1.5 sano, Conchita oo 1 sano ah, Purdy oo 4 bilood jooga, Lucy iyo Splash 3 bilood, Sebastion oo 3 jir ah iyo Catreeya oo 4 jir ah
eey Wiener madow iyo tan
Ey Havanese ah oo 8 toddobaad jirsaday, sawirna waxaa iska leh MistyTrails Havanese
Zorro, oo ay soo gudbisay MistyTrails Havanese — Siraha Zorro wuxuu ka yimid Spain. Eygan ayaa gabi ahaanba la jaan qaadaya heerka CKC iyo AKC ee Havanese.
Tusaalooyinka shukulaatada parti, caddaan, buluug madow, iyo madow Havanese ah. Laba ka mid ah midabada ugu dhifka yar ee noocyada Havanese waa buluug buluug ah iyo shukulaatada. Midabadaas iyo madowku asal ahaan kamay mid ahayn heerka isirka. Lahaanshaha sawirka MistyTrails Havanese iyo Elite Havanese
Pablo oo la socota Salida Salida waa nadiif reer Cuba ah oo reer Havanese ah, oo la keenay oo ay leedahay Alida Wasmuth, waxaa iska leh sawir MistyTrails Havanese
Havanese waxay ku lahaan kartaa hal eey oo hal qashin ah sida caadiga ah waa 3, 4, ama 5 eey. Lix waxaa loo tixgeliyaa qashin weyn oo loogu talagalay Havanese. Waxaan soo maray dhowr qashin oo 7-puppy ah, labo qashin oo 8-yar oo yar yar ah iyo hal qashin oo 9-puppy ah. Lahaanshaha sawirka MistyTrails Havanese
Havanese xaddidan MBIS CKC Grand Ch. Ex / AKC / Intl Champion Eddie Murphy oo jooga MistyTrails CGN, # 1 Ey ku taal Kanada. Lahaanshaha sawirka MistyTrails Havanese Aug 2012
Catreeya oo 10 jir ah— Iyadu waa hooyada 11 eey eeyo yaryar ah waxayna ku guuleysatay halyeeygii ugu fiicnaa Show Specialty. Waxaa ku caano maashay MistyTrails Havanese. ' Waxaa iska leh oo jecel Steven Ballantyne
Eeg tusaalooyin badan oo Havanese ah
Sawirada Havanese 1
Sawirada Havanese 2
Sawirada Havanese 3
Sawirada Havanese 4
Sawirada Havanese 5
Sawirada Havanese 6
Sawirada Havanese 7
Sawirada Havanese 8
Sawirada Havanese 9
Sawirada Havanese 10
Sawirada Havanese 11
Sawirada Havanese 12
Sawirada Havanese 13
Sawirada Havanese 14
Sawirada Havanese 15
Sawirada Havanese 16
Sawirada Havanese 17
bisad dabada ayey ku haysaa dhabarka
eeyaha carrabkoodu dhaadheer yahay
8 sano jir eey feeryahan
liistada naadiyada american liiska
aan eey pees marka i isaga salaaxid
photos of terriers buuralayda galbeed